Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Oktobra 2019	• 13 Comments
Fianakaviana, rainy, matoatoa lahy. Tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny zaridaina matoatoa ny matoatoa, satria ny tantara matoatoa dia tsy maintsy mijanona ho mampientam-po sy "mahatoky". PsyOp iray mampiditra ny fisainan'ny polisy eritreritr'i George Orwell ary afaka mijery ao ambadiky ny varavarana rehetra tsy misy karatra fikarohana. Mipetraka ao an-tsainao isan'andro ny tantara avy amin'i De Telegraaf; ny gazety izay ao amin'ny '40 /' 45 […]
Total visits: 16.019.819
Zandi Eyes op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1